Isitudiyo esikuMgangatho oMgangatho oPhezulu weLwandle oluPhambili
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguKhaled & Heather
Aloha kwaye wamkelekile kwiparadesi yethu yesiqithi saseKauai!
Umgangatho wethu ophezulu wolwandle kunye nestudiyo esiphambi kolwandle sikwiSiqithi kuLwandle lwaseKapa'a, eKauai, kwaye sibonelela ngokumangalisayo, iimbono ezithe ngqo zephaneli yoLwandlekazi lwePasifiki.
Sinikezela ngeendwendwe zethu iWifi yasimahla. Indawo yokupaka ikwasimahla kwaye akukho zifizi zokuchithelwa iiholide. Into oyihlawulayo kwi-AirBnB lixabiso lakho lokugqibela, akukho ntlawulo yongezelelweyo.
Sizama ukufezekisa amava amangalisayo kwaye angenakulibaleka kwiindwendwe zethu!
Yonwabela ikofu yakho yasekuseni kunye nee-cocktails zasemva kwemini kwi-lanei ngelixa ubukele iminenga (ngexesha), amahlengesi, kunye nokuphuma kwelanga okumnandi. Vumela isandi samaza olwandle sikulalise rhoqo ebusuku.
I-condo yethu ikwi-East Shore, umgama nje wemizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. I-East Shore yeyona ndawo ifanelekileyo yekhaya lokuhlola uMntla kunye noMazantsi eNxweme, kwaye kumgama wemizuzu emininzi ukusuka kwiindlela ezininzi zokukhwela intaba.
Isitudiyo sethu se-studio condo sibonelela ngezinto ezininzi ezitofo-tofo zekhaya, kubandakanya ne-air conditioning, i-queen bed epholileyo, kunye nebhedi yesofa yokudonsa (i-twin size mattress, ilala 1). Ikhitshi linefriji encinci, i-microwave, umenzi wekofu, i-blender, i-oven ye-toaster, izitya, i-silverware, kunye nempahla. Kwakhona kubandakanywa ukufikelela kwi-intanethi ye-intanethi ye-intanethi ye-intanethi, i-TV yesikrini esisicaba esinentambo yasimahla, kunye ne-Netflix ehambelanayo.
Sikunika iitawuli ezithambileyo zaselwandle, izitulo zaselwandle ezitofotofo, iambrela yaselwandle, ipholile, ibhayinotyhulayi kunye neepali zokuhamba. Sikwanazo neencwadi ezininzi zesikhokelo ukuze iindwendwe zizonwabele.
I-condo yethu ikumgangatho we-3 kwisakhiwo esinemigangatho emi-3. Akukho lift.
I-Islander kuLwandle ibonelela ngedama lokuqubha elisecaleni laselwandle kunye nebhafu eshushu, kunye nebha yetiki apho unokuphelisa unxano lwakho ngesiselo esimnandi setropikhi.
I-Island eLwandle isecaleni kweMarike yeCoconut apho uya kufumana iindawo zokutyela, iikhefi, iivenkile ezikhethekileyo, nokunye. Thatha ithuba lendawo yethu kwiNdlela entle yeKauai Bike, apho unokubaleka, uhambe okanye ukhwele ibhayisekile ecaleni kolwandle. Yonwabela iimarike zomfama wasekhaya ezikufutshane, ukubheqa kuMlambo iWailua, ukunyuka ukuya kwiingxangxasi ezintle, kunye neminye imisebenzi yangaphandle ngexesha lokuhlala kwakho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna iingcebiso malunga neendawo onokuzijonga ngexesha lokuhlala kwakho, silapha ukunceda! Singathanda ukwabelana nawe ngekhaya lethu kude nekhaya kwaye siyathemba ukuba uyonwabele njengathi.
Indawo yokupaka yasimahla. Akukho mali zokuchitha iholide. Akukho ntlawulo yoncedo. Akukho mali zifihliweyo.
Izinto eziluncedo kwi-Condo:
Ulala ukuya kutsho kwi-2, kuquka iintsana kunye nabantwana
Umoya womoya kunye nefeni
Ibhedi yokumkanikazi enomandlalo opholileyo
Isiliva, iiglasi, iikomityi, iipleyiti, izitya
I-intanethi yasimahla enesantya esiphezulu (iWiFi)
Idokhi ye-iPhone enewotshi ye-alarm / istiriyo esincinci
Iilinen ezipholileyo nezithambileyo zokulala
Igumbi lokuhlambela elipheleleyo elineshawa kunye nebhafu
Iitawuli ezithambileyo zokuhlambela zombini kunye nolwandle
Izitulo zaselwandle, iambrela, indawo epholileyo, kunye neepali zokuhamba
Iincwadi zesikhokelo zeKauai
Isomisi seenwele, i-ayina, kunye nebhodi yoku-ayina
Ixabiso lokubhukisha kwakho libandakanya ireyithi yegumbi lasebusuku kunye:
- Irhafu yendawo yokuhlala yaseHawaii: I-14.75% sele ifakiwe kwireyithi yegumbi.
-Indleko yakho yogcino lulonke ibandakanya umrhumo wexesha elinye wokucoca i-85 yeedola zokuqinisekisa ukuba i-condo icocekile ngokufika kwakho. Ukuba unqwenela ukuba nokucoca okuphakathi ngexesha lokuhlala kwakho, nceda usazise kwaye sinokucwangcisa oku ngaphambi kokufika kwakho. Iindleko yi-85 yeedola.
- Indawo yokupaka isimahla kwaye akukho zifizi zokuchithelwa iiholide.
Ukuhlala ubusuku obuyi-10 nangaphezulu: Kuya kufuna i-85 yeedola eziphakathi-ukuhlala ucocekile. Ukucoca kuyafuneka rhoqo emva kweentsuku ezili-10. Emva kokuba ubhukishe, isicelo esongezelelweyo sentlawulo siya kongezwa kwindawo oyibekileyo ukuze uhlawule ukucoca okuphakathi. (ubusuku be-10 = i-$ 85 intlawulo yokucoca phakathi, ubusuku be-20 = i-$ 170 ye-2 yokucoca i-middle-stay, njl.).
Uhlaziyo lwe-COVID-19: Sinikezela ngembuyiselo epheleleyo ukuba iKauai ibuyisela isithintelo sokuhamba kwiindwendwe ezingenayo. Ngezithintelo zangoku zokuhamba zedolophu yaseKauai nceda ubhekisele kwiwebhusayithi yeKauai County ye-covid-19.
4.92 · Izimvo eziyi-209
Umbuki zindwendwe ngu- Khaled & Heather
UKhaled & Heather yi-Superhost
Inombolo yomthetho: 430020130145